xarunta | RayHaber
General Directorate of State Tareennada ee Jamhuuriyadda Turkey, ka leexinayn ee Mersin-Adana-Osmaniye iyo gobolladaba Hatay xadka waddooyinka tareenka iyo saldhigyada u dhaxaysa May 20 24-2019 gacan bir ah taariikhda gacanta ku xereen ayaa la soo sheegay in ay sameeyaan. Caafimaadka aadanaha iyo xoolaha [More ...]
TCDD ee Mersin-Adana Qeybta Qadka
Republic of Turkey ka Agaasinka Guud ee Maamulka Waddooyinka Tareennada State (TCDD) ku yiri hadal uu, Adana oo lagu dabooli doono yaranta in waddooyinka tareenka iyo saldhigyada waxaa keentay in shacabka xadka Mersin ahaa ay sabab u tahay dawooyinka. Waxaa laga sameeyay TCDD [More ...]
Saldhigga, cunugga isku dayaya inuu ka baxo albaabka tareenka albaabka, Sarkaalka Tareenka Cumar Gokcen ayaa horjoogsaday. Tareenka Rakaabka ah ee 32714 oo iska leh TCDD Taşımacılık A.Ş. [More ...]
TCDD wuxuu diyaariyaa xaraarad sarreeya oo loogu talagalay dabeecadaha isdaba jooga ah
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) darbay filim dhaceen for craze ah sawir degdeg ah u koraya ee sannadihii la soo dhaafay. Gaar ahaan ka dib markay dhallinyardu rabaan inay iskood isu taagaan iyagoo fuushan wadiiqooyinka saldhigyada iyo xarumaha idaacadda [More ...]